Global Voices teny Malagasy » Libanona: Akademia, Fambolena ary Asa Fanorenana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Avrily 2019 5:38 GMT 1	 · Mpanoratra Moussa Bashir Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Libanona, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fanabeazana, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Haisoratra, Mediam-bahoaka, Politika, Sakafo, Tantara, Toekarena sy Fandraharahàna, Tontolo_iainana, Voina, Zon'olombelona
Ndeha isika hanomboka ny fihodinan'ny tontolon'ny blaogy Libaney amin'ity herinandro ity miaraka amin'ireo lahatsoratra tsy ara-politika. Ndeha hatombotsika miaraka amin'ny lahatsoratra mikasika ireo salady Libaney roa izay ampiasaina ho toy ny fampazotoana homana mandritra ny fisakafoanana:
Mampiseho antsika ny fomba fikarakarana Fattush sy Tabboule i Skylark  (Fr), izay salady Libaney roa tena tsara tsiro matetika hita rehefa miray latabatra amin'ny vahiny ny Libaney.
Rehefa avy nameo fahafahampo ny lelantsika àry isika, andao indray ho any amin'ny fanontàna sy ny akademia. Nanoratra tao amin'ny Sehatra Fifanakalozankevitry ny Blaogera Libaney mikasika ny ”Fahavaratra Very: karatra paostaly avy any Libanona” i Lazarus  , izay boky manambatra teny notsongaina maro, nosoratana nandritra ny adim-pahavaratra tany Libanona, maneho ireo eritreritra sy fihetsehampon'ny olona, Libaney na tsy Libaney, nandritra izany ady izany:
Nandritra izany adim-pahavaratra izany, olona maro no nanoratra ireo eritreriny sy fihetsehampony ary nandefa izany tany amin'ireo namany sy fianakaviany tamin'ny alalan'ny imailaka, blaogy ary simaiso. Taorian'ny volana maro niasana, afaka nanangona teny notsongaina avy tamin'ireo soratra ireo ny vondron'olona iray, izay ny tanjony dia ny haka ny votoatin-kevitra tamin'izany fotoana izany. Avy tamin'ny olona Libaney sy tsy Libaney ireo soratra ireo ary nalahatra (toy ny endrika karatra paostaly) niaraka tamin'ny sary manokana izay nalain'ireo olona ireo, nahatonga izany boky izany ho an'ny vahoaka avy amin'ny vahoaka.
Mijanona ao amin'ny tontolo akademika, manana an'i Ibn Bint Jbeil  isika, izay manao antso ho fanohanana ny Fikambanaben'ny Mpianatra Palestiniana ao amin'ny Oniversiten'i San Francisco. Miasa amin'ny fananganana hosodoko an-drindrina ilay Firaisana, izay manome voninahitra an'Itompokolahy Dr. Edward Said sy ny kolontsaina Palestiniana, nekena ho an'ny toeram-ponenan'ny mpianatra ao amin'ny oniversiten'izy ireo.
Neken'ny kaomity sy vondrona mpianatra ary filan-kevitry ny oniversite ilay tolo-kevitra ary nahazo fanohanana, fa dingana iray farany talohan'ny fanekena azy, nandà aloha loatra ilay hosodoko manaran-drindrina ny filohan'ny oniversite Robert A. Corrigan ary nametraka didim-pitsarana manalava fe-potoana ho an'ny kanto rehetra ao amin'ny Foibe ho an'ny Mpianatra ao amin'ny Oniversiten'i San Francisco.
Inona no hevitra natohitr'i Corrigan? Nilaza izy fa ny politikan'ny Oniversite dia ny hamelàna ny fankalazana sy ny fieboeboana amin'ny lova sy kolontsainan'ny olona iray ”naseho tsy nisy fankahalana na fanambaniana ny iray hafa” (kolontsaina) .
Mba jereo anie ilay tolotra hosodoko an-drindrina etsy ambony e, ary mba ezaho tadiavina hoe inona àry no zavatra tian'i Corrigan ho lazaina amin'izany.
Zara raha omena ny fiheverana sahaza azy ny fambolena any Libanona. Manasongadina ny fahadisoan'ity politika ity tao anatin'ny sasany tamin'ireo lahatsorany i Abu Ali. Tao anatin'ity lahatsoratra iray ity, hadihadian’ i Abu Ali  ny tetik'i Israely tamin'ny fanimbàna ny tambatsela sosialin'i Libanona Atsimo amin'ny fanimbàna ny famboleny izay mampifandray ny olona amin'ny taniny ary omeny tsiny ihany koa ireo governemanta Libaney nifanesy noho ny tsy firaharahiana ny fampandrosoana ireo faritra ambanivohitra sy ny fiadanan'ireo mpamboly kely manerana an'i Libanona.
Na eo aza ny zavatra mety eritreretin'ireo olona an-drenivohitra, mbola zava-dehibe foana any Libanona ny fambolena. Marina izany, indrindra fa any Atsimo. Tahaka ny any an-kafa rehetra ao ambanivohitr'i Libanona, tsy ny famboleny no loharanon-karena voalohany ho an'ireo mponina any Atsimo ireo, fa eo amin'ny 30 isan-jatony eo no anjara birikin'izany amin'ny fitambaran'ny fidirambolan'ny fiankaviana. Tsy anatin'io tarehimarika io ireo tombontsoa ara-pahasalamana, ara-tsosialy, ara-kolontsaina, ara-tontolo iainana ary ara-panahy omen'ny fambolena. Mpamboly kely, mpamboly ho an'ny fianakaviany izay indrindra mamokatra ho an'ny tenany sy ho an'ny tsena eo an-toerana ny ankamaroan'ireo mpamboly any Atsimo. Nandoma mafy azy ireo ny ady tamin'ny volana Jolay. Satria nafindran'ny tafika Israeliana toerana izy ireo ka tsy afaka nioty ireo vokany, izay lo teny an-tsaha teny.
Ho an'ny olona vaovao amin'ny raharaha ara-politika any Libanona, mety ho zavatra sambany mba nisy teo amin'y tantara Libaney ny zavatra miseho ankehitriny. Manoratra andrana lahatsoratra ara-tantara iray i Marxist From Lebanon , nanomboka tany amin'ny 1840 ka hatramin'ny andro iainantsika, mampiseho ny toa fomba fiverimberenan'ny tantara ary manolotra ny anton'izany:
”Nisy ny fahalalahana sy ny demokrasia, tsy hoe na teo aza, fa noho, ny fiarahamonina misy kaominina maro ao amin'ny firenena: nahatonga tsy ho azo tanerahana ny fandraisana vahaolana jadona ny fitombinan'izany”
Mpihira foana i Libanona rehefa hisy fifanandrinana hiseho.
Tsy omena lanja any Libanona ny demokrasia, fa io no fomba tokana na dia mifototra any amin'ny sekta aza ny demokrasia any Libanona.
Farany, tsikerain'i Sean  ny fanapahankevitr'i Amerika hametraka ho anaty lisitra mainty ny Jihad al Binaa, orinasa mpanao asa fanorenana izay mifandray amin'ny Hezbollah, ho toy ny fomba hafahafa hangalana namana any Libanona :
Tomponandraikitra tamin'ny fanarenana trano aman'arivony maro tany Libanona izay rava na simba noho ireo fanafihana Israeliana ny Al-Binaa. Tokony ho hetsika hanelingelina ireo ezaka fanarenan'ny Hezbollah izany, angamba mba hanomezana tombony ho an'ny governemanta. Fa hatreto aloha i Beiroty dia toa mba tsy dia narisika ny handany ny vola rehetra nomena azy ho an'ny fanarenana ireo trano any Atsimo na any Dahiye. Tetsy andaniny kosa, nandefa injeniera 1000 sy mpilatsaka an-tsitrapo aman'arivony maro kosa ny Hezbollah mba hanaov asa fanarenana any amin'ireo faritra manodidina simba na rava.
Salamà tsara ary miverena indray ho an'ny zavatra bebe kokoa avy any Libanona.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/30/137877/
 Skylark : http://skylarkvoice.blogspot.com/2007/02/la-cuisine-libanaise-de-skylark.html
 Ibn Bint Jbeil: http://ibnbintjbeil.blogspot.com/2007/02/support-edward-said-mural.html
 Abu Ali: http://mslevantine.blogspot.com/2007/02/courageous-decisions.html
 Marxist From Lebanon: http://marxistfromlebanon.blogspot.com/2007/02/lebanon-and-democracy-doomed-to-repeat.html